RASMI: Kooxda Liverpool oo heshiiska u kordhisay Kabtankeeda Jordan Henderson… (Imise sano ayuu saxiixay?) – Gool FM
RASMI: Kooxda Liverpool oo heshiiska u kordhisay Kabtankeeda Jordan Henderson… (Imise sano ayuu saxiixay?)
(Liverpool) 31 Agoosto 2021. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa heshiis cusub ku abaal-marisay Kabtankeeda Jordan Henderson.
Kabtan Jordan Henderson ayaa qalinka ugu duugay Liverpool heshiis cusub oo afar sanadood ah, kaasoo kooxda ku sii hayn doona illaa xagaaga 2025-ka.
31-sano jirkaan ayaa u saftay Liverpool 394 kulan tan iyo markii uu kaga soo biiray Sunderland sanadkii 2011-kii, waxaana uu noqday Kabtanka Kooxda Reds sanadkii 2015-kii.
Henderson, kaasoo Liverpool kula guuleystay Horyaalka Premier League, Champions League iyo League Cup ayaa heshiiskiisii hore waxaa kaga harsanaa labo sanadood, waxaana uu aqbalay inuu sii joogo garoonka Anfield illaa sanadka 2025-ka.
Xiddiga khadka dhexe ee xulka qaranka England ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu dambeeyey ee mustaqbalkiisa u hibeynaya Kooxda kaddib Virgil van Dijk, Alisson, Fabinho, Trent Alexander-Arnold iyo Andrew Robertson oo dhammaantood heshiisyo cusub u saxiixay Naadiga xagaagan.
RASMI: Kooxda Juventus oo ku dhawaaqday inay la soo wareegtay Moise Kean